နှလုံးရောဂါမဖွဈခငျ တဈလအလိုမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက သတိပေးမယျ့ အခကျြ (၈) ခကျြ
HomeKnowledgeနှလုံးရောဂါမဖွဈခငျ တဈလအလိုမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက သတိပေးမယျ့ အခကျြ (၈) ခကျြ
H October 10, 2020
ကွိုတငျ ကာကှယျခွငျးက ကုသခွငျးထကျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ဘယျရောဂါအတှကျမဆို ရောဂါလက်ခဏာ မပွခငျ ကာကှယျထားတာ ကောငျးပါတယျ။ နှလုံးရောဂါရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာရပျတှကေ တဈလ ကွိုတငျပျေါပေါကျ တတျပါတယျ။ အရမျးကွီးတော့ မလနျ့သှားပါနဲ့။ ဒါပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ သတိရှိတာက ဘယျတော့မှ ဆိုးကြိုးမဖွဈပါဘူး။
ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ပငျပနျးနှမျးလခြွငျးဟာ နှလုံးရောဂါရဲ့ အဓိကလက်ခဏာရပျ တဈခုပါပဲ။ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားတှထေကျ ပိုပွီး ပငျပနျးနှမျးလကြွပါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့ ပငျပနျးနှမျးလရြတာ မဟုတျပါဘူး။ တဈနတေ့ာ ကုနျဆုံးတော့မယျ ဆိုရငျ ပိုပွီး ပငျပနျးလာတတျပါတယျ။ ဒီရောဂါလက်ခဏာက ထငျရှားတဲ့အတှကျ သတိမထားဘဲ မနသေငျ့ပါဘူး။ တဈခါတရံမှာ သာမနျအလုပျလေးတှဖွေဈတဲ့ အိပျယာသိမျးခွငျး၊ ရခြေိုးခွငျးတို့မှာ မောပနျးနတေတျပါတယျ။
7. ဝမျးဗိုကျပိုငျး နာကငျြခွငျး
ဝမျးဗိုကျပိုငျး နာကငျြခွငျး၊ ဗိုကျမအီမသာဖွဈခွငျး၊ ဗိုကျဖောငျးပှခွငျး၊ ဗိုကျနာခွငျးစတာတှကေ နှလုံးရောဂါရဲ့ အဖွဈမြားတဲ့ လက်ခဏာတှပေါပဲ။ ဒီလက်ခဏာတှကေို အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးမှာပါ တှရေ့တတျပါတယျ။ ဝမျးဗိုကျပိုငျး နာကငျြမှုတှကေ နှလုံးရောဂါ မဖွဈခငျမှာ မကွာခဏ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ ပငျပနျးတဲ့အခါ အစာအိမျနာတာ ပိုဆိုးလာပါတယျ။
အိပျမပြျောခွငျးက နှလုံးရောဂါနဲ့ လဖွေတျနိုငျခွေ ပိုမြားပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှမှော အဖွဈမြားပါတယျ။ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုမြားတဲ့ အခါ၊ မလြေ့ော့တတျလာတဲ့အခါ အိပျမပြျောခွငျးဟာ မကွာခဏ ဖွဈပါတယျ။ အိပျပြျောဖို့ခကျခွငျး၊ မကွာခဏနိုးခွငျးနဲ့ အိပျယာ စောစောနိုးခွငျးတို့က နှလုံးရောဂါရဲ့ လက်ခဏာတှပေါပဲ။
အသကျရှူဖို့ ခကျခဲတဲ့အခါ အသကျရှူမဝခွငျး ဆိုတဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ဝဒေနာကို ခံစားရပါတယျ။ နှလုံးရောဂါမဖွဈခငျ ခွောကျလ အလိုတညျးက ဒီရောဂါလက်ခဏာတှကေို အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးမှာပါ တှရေ့ပါတယျ။ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ သတိပေးတဲ့ လက်ခဏာတှပေါ။ လလေုံလောကျစှာ မရခွငျး၊ မူးဝခွေငျး၊ အသကျရှူမဝခွငျးက နှလုံးရောဂါရဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။
ဆံပငျကြှတျခွငျးကလညျး သိသာတဲ့ လက်ခဏာရပျပါပဲ။ အသကျ 50 ကြျောတဲ့ အမြိုးသားတှမှော ဆံပငျကြှတျတာကို အမြားဆုံး တှရေ့ပါတယျ။ အခြို့အမြိုးသမီးတှလေညျး နှလုံးရောဂါရဲ့ လက်ခဏာအနနေဲ့ ဆံပငျကြှတျပါတယျ။ ကျောတီဇုနျးဟျောမုနျး မွငျ့တဲ့အခါ ဆံပငျကြှတျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဆံပငျကြှတျတာကလညျး မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ အရာဖွဈလို့ ဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။
3. နှလုံးခုနျနှုနျး မမှနျခွငျး
ရုတျတရကျ ထိနျးမရသိမျးမရအောငျ ကွောကျစိတျဝငျတဲ့အခါ၊ စိုးရိမျပူပနျမှုမြားတဲ့အခါ နှလုံးခုနျနှုနျး မမှနျတော့ပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှကေ နှလုံးခုနျနှုနျး ပိုမမှနျတတျပါဘူး။ နှလုံးခုနျနှုနျးမမှနျခွငျးက မမြှျောလငျ့ဘဲ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ နှလုံးခုနျနှုနျး မမှနျခွငျးနဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျး မြားခွငျးတို့က ကှဲပွားပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျခွငျးက နှလုံးခုနျနှုနျးမြားခွငျးကို ပိုအားပေးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါရဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။
ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ခြှေးထှကျလှနျခွငျးက နှလုံးရောဂါရဲ့ ရှပွေ့ေးလက်ခဏာရပျပါပဲ။ ခြှေးထှကျလှနျခွငျးက နဖွေ့ဈဖွဈ ညဖွဈဖွဈ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာကို အမြိုးသမီးတှမှော ပိုတှရေ့တတျပါတယျ။ ခြှေးထှကျလှနျခွငျးက သှေးဆုံးကိုငျခြိနျ ညဖကျခြှေးထှကျခွငျးနဲ့ မှားတတျပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာက တုပျကှေးရဲ့လက်ခဏာနဲ့လညျး ဆငျတူပါတယျ။ အပူခြိနျမြားတဲ့အခါ၊ ခန်ဓာကိုယျလှုပျရှားမှုမြားတဲ့ အခါ အသားအရမှော ခြှေးတှနေဲ့ စိုထိုငျးထိုငျးဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ညဘကျမှာ ခြှေးပိုထှကျတယျလို့ ထငျရပွီး မနကျရောကျရငျ အိပျယာခငျးတှေ စိုထိုငျးနတေတျပါတယျ။
ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး အမြိုးမြိုးကို အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးမှာပါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားရပါတယျ။ အမြိုးသားတှမှော ရငျဘတျအောငျ့ခွငျးက နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျတဲ့ အရေးကွီးဆုံးလက်ခဏာရပျဖွဈပွီး အမှတျတမဲ့မနသေငျ့ပါဘူး။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ 30 ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ ရငျဘတျအောငျ့တာကို ခံစားရပါတယျ။ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျးဟာ လကျမောငျးတဈဖကျ၊ သို့မဟုတျ လကျမောငျးနှဈဖကျ (အထူးသဖွငျ့ ဘယျဘကျ)၊ အောကျမေးရိုး၊ လညျပငျး၊ ပုခုံးနဲ့ အစာအိမျအထိ မသကျမသာဖွဈစပေါတယျ။ ရငျဘတျအောငျခွငျးက အမွဲတမျးလညျး ဖွဈနိုငျသလို ယာယီလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အဝလှနျခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျလှုပျရှားမှု မရှိခွငျး၊ ဆေးလိပျသောကျခွငျးကွောငျ့ နှလုံးရောဂါ အဖွဈမြားပါတယျ။ ဒီအခကျြလေးတှကေတော့ သငျ့ကနျြးမာရေးကို သတိပွုမိနိုငျပွီး နှလုံးရောဂါကို ကွိုတငျကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။
နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင် တစ်လအလိုမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးမယ့် အချက် (၈) ချက်
ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်ရောဂါအတွက်မဆို ရောဂါလက္ခဏာ မပြခင် ကာကွယ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာရပ်တွေက တစ်လ ကြိုတင်ပေါ်ပေါက် တတ်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးတော့ မလန့်သွားပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် သတိရှိတာက ဘယ်တော့မှ ဆိုးကျိုးမဖြစ်ပါဘူး။
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းလျခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါရဲ့ အဓိကလက္ခဏာရပ် တစ်ခုပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုပြီး ပင်ပန်းနွမ်းလျကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းလျရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးတော့မယ် ဆိုရင် ပိုပြီး ပင်ပန်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာက ထင်ရှားတဲ့အတွက် သတိမထားဘဲ မနေသင့်ပါဘူး။ တစ်ခါတရံမှာ သာမန်အလုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ အိပ်ယာသိမ်းခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းတို့မှာ မောပန်းနေတတ်ပါတယ်။
7. ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း နာကျင်ခြင်း
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း နာကျင်ခြင်း၊ ဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဗိုက်ဖောင်းပွခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်းစတာတွေက နှလုံးရောဂါရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။ ဒီလက္ခဏာတွေကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာပါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း နာကျင်မှုတွေက နှလုံးရောဂါ မဖြစ်ခင်မှာ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပင်ပန်းတဲ့အခါ အစာအိမ်နာတာ ပိုဆိုးလာပါတယ်။
အိပ်မပျော်ခြင်းက နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများတဲ့ အခါ၊ မေ့လျော့တတ်လာတဲ့အခါ အိပ်မပျော်ခြင်းဟာ မကြာခဏ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခြင်း၊ မကြာခဏနိုးခြင်းနဲ့ အိပ်ယာ စောစောနိုးခြင်းတို့က နှလုံးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။
အသက်ရှူဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခါ အသက်ရှူမဝခြင်း ဆိုတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင် ခြောက်လ အလိုတည်းက ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာပါ တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ လေလုံလောက်စွာ မရခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်းက နှလုံးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကလည်း သိသာတဲ့ လက္ခဏာရပ်ပါပဲ။ အသက် 50 ကျော်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာကို အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။ အချို့အမျိုးသမီးတွေလည်း နှလုံးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာအနေနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ပါတယ်။ ကော်တီဇုန်းဟော်မုန်း မြင့်တဲ့အခါ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာကလည်း မပေါ့ဆသင့်တဲ့ အရာဖြစ်လို့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
3. နှလုံးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်း
ရုတ်တရက် ထိန်းမရသိမ်းမရအောင် ကြောက်စိတ်ဝင်တဲ့အခါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတဲ့အခါ နှလုံးခုန်နှုန်း မမှန်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက နှလုံးခုန်နှုန်း ပိုမမှန်တတ်ပါဘူး။ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းက မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်းနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း များခြင်းတို့က ကွဲပြားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ခြင်းက နှလုံးခုန်နှုန်းများခြင်းကို ပိုအားပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းက နှလုံးရောဂါရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာရပ်ပါပဲ။ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းက နေ့ဖြစ်ဖြစ် ညဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာကို အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းက သွေးဆုံးကိုင်ချိန် ညဖက်ချွေးထွက်ခြင်းနဲ့ မှားတတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာက တုပ်ကွေးရဲ့လက္ခဏာနဲ့လည်း ဆင်တူပါတယ်။ အပူချိန်များတဲ့အခါ၊ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့ အခါ အသားအရေမှာ ချွေးတွေနဲ့ စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ညဘက်မှာ ချွေးပိုထွက်တယ်လို့ ထင်ရပြီး မနက်ရောက်ရင် အိပ်ယာခင်းတွေ စိုထိုင်းနေတတ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး အမှတ်တမဲ့မနေသင့်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ 30 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရင်ဘတ်အောင့်တာကို ခံစားရပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းဟာ လက်မောင်းတစ်ဖက်၊ သို့မဟုတ် လက်မောင်းနှစ်ဖက် (အထူးသဖြင့် ဘယ်ဘက်)၊ အောက်မေးရိုး၊ လည်ပင်း၊ ပုခုံးနဲ့ အစာအိမ်အထိ မသက်မသာဖြစ်စေပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင်ခြင်းက အမြဲတမ်းလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ယာယီလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု မရှိခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ သင့်ကျန်းမာရေးကို သတိပြုမိနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။